Chess - omunye omdala puzzle imidlalo emhlabeni. Yasungulwa kwakhe eminyakeni engaphezu kwengamakhulu nanhlanu edlule eNdiya yasendulo, lo mdlalo namanje akalilahlile ngokuhlathulula ukusebenza kwawo funa. Kuze okwamanje wokungenela mass computer ku ekuphileni kwansuku zonke inqwaba yabantu abasemhlabeni wonke wasala okungcono chess Umqeqeshi ukuze ingqondo. Ungase uthi ngisho kungcono umdlalo lababusi, ngenxa inani elikhulu kakhulu abaholi lamazwe kanye izifundazwe, ojenene wamabutho namasevisi imfihlo bayizingcweti lo mdlalo lo mdlalo. Zama ukuqonda izici zayo futhi uqonde ukuthi ukuwina umdlalo we-chess.
Ingqikithi yalo mdlalo we-chess
Abaningi abadlali omkhulu ngokuthi siye sanikela ngeminyaka eziningana zokuphila kwakhe honing amakhono ekupheleleni umdlalo we-chess. Njengoba kunoma yiluphi uhlobo lomsebenzi, ukuze ube uyingcweti chess udinga ukuchitha isikhathi esiningi ukuze baqonde nohlaka theory kanye ukuqhubeka nemakhono labawatfolile ongazijwayele.
akufanele kuthathwe chess njengoba umdlalo nje umdlalo. Lo mdlalo esiyingqayizivele kungenziwa ngokuthi a Simulator ngesizathu esithile. Akumele ngizibuza mayelana nendlela ukuwina kumnyama chess, kodwa yokuthi kungani beyidinga!
Ubufakazi besayensi bubonisa ukuthi phakathi nokuphila ezingeni kokuhlakanipha kwabantu kakhulu kungakhuphula. Noma ubani ezahlukweni semali zabo nokulandelanisa isikhathi ukubuthelela ilwazi elitjha, ngokuqinisekile ukudlula ontanga yakhe abanamakhono kakhudlwana abangamkhonzi.
Kanjani ngokushesha ukuwina umdlalo we-chess?
Ngakho, ake sithi wena namanje nesithakazelo ngxabano nabanengqondo futhi zokudala owembula kunendoda umdlalo chess. Kodwa lapho uqala? Indlela ukunqoba umdlalo we-chess?
Impendulo yale mibuzo ozama ukunikeza inqwaba chess zokuzisiza, inkomba iziqondiso, kanye nezinsiza-inthanethi. Ukunikezela inkathi ethile yesikhathi ekutadisheni neticukatsilwati, nokusebenzisa ulwazi practice, kungathiwa kule game eziningana amaphethini.
Abadlali kungenziwa ahlukaniswe ezingeni inani uhamba ukuthi bayakwazi ukucabanga kusengaphambili. Futhi singakwazi ukufuna ukuvunyelwa ngezinga elikhulu okungenzeka bathi: omunye wabo, okuyinto, isibonelo, uyakwazi abale zonke inhlanganisela bame ibhodi uhamba ezintathu phambili, ukuze uwine nalowo okholwa izinyathelo ezimbili kuphela phambili.
Ukuthatha njengesisekelo lokhu nokucabanga, kungaba bazitshela ukuthi uma phambi kwakho kuyinto umdlali abangakwazi ukuya bacabange ngomdlalo we-ngisho kwelinye unhlangothi, ingasetshenziswa ngokumelene inhlanganisela izindinganiso uhamba ezimbalwa ezilula.
Indlela ukunqoba umdlalo we-chess ngesikhathi usaqala?
Kukhona inala kokuqala iqoqo ongakhetha ukuthi ungadlala ngokumelene abadlali imfundamakhwela. Lolu hlobo abadlali bavame ukuhlaziya ngokuphelele ilungiselelo izingcezu enkundleni futhi zibashukumisele ngokungacabangi. Singasho ukuthi cishe njalo party, uma kahle isetshenziswa ibhodi ngabe fikisa ahlula.
Inhlanganisela ezivamile kuyinto freshman ngokumelene okuthiwa "Owakwami zezingane."
Ake notation (i Isibalo emhlophe): 1. E4 2. 4. CC4 3. FN5 O: × F7.
Ingqikithi lelisu ilula: indlovukazi mhlophe futhi umbhishobhi ehlasela F7 ensimini. Njengomthetho, iphathi enjalo luphela e baphendukela lesine.
Cabangela esinye irekhodi, manje idlala amaqatha black: 1. f3 E6 2. G4 FN4x.
Uma uke ngandlela-thile uphathe ukuqaphela lo mdlalo, ungakwazi ukubuka a strange ubuso bakhe isitha, ekuboniseni imizwelo ezahlukene.
Indlela ukunqoba chess khompyutha?
Ngeshwa, impendulo yalo mbuzo kunzima ngempela. Kwenziwe akunjalo kudala ezifundweni zesayensi luye lwabonisa ukuthi kumakhompyutha amaningi yesimanje kanti nengqondo yomuntu ayikwazi ukuphatha. Ngempela, indlela yokunqoba umdlalo we-chess ngesikhathi imoto, okuyinto sinquma zonke uhamba kungenzeka inqwaba izinyathelo phambili?
Impendulo yalo mbuzo ukuthola ngishiyeka lwe-computer. Akufanele sibakhohlwe ukuthi yiluphi uhlelo abhalwa yindoda, kodwa sona human. Uma wazi kusengaphambili iphuzu ezibuthakathaka ikhompyutha logic algorithm kulindeleke, ungasebenzisa imbobo ikhodi, futhi ukushaya computer uzibona unkulunkulu.
Kodwa-ke, iyiphi software kanye hardware ungakwazi ukuwunqoba uhlelo izinga ebhaliwe kanye nemishini namandla kakhulu. Lo mthetho usebenza imidlalo esilahla umuntu, uma isitha sakho kusobala onamandla kunawe. Ungasebenzisa imidlalo ye-computer Simulator (chess kungaba yokungathembeki futhi baya!), Futhi esebenza ngamagagasi omsakazo.
Le filimu "Vampire": abadlali
Koos cubes - a ukuhlolwa ethandwa futhi iphazili
Adventure American: ukubukela noma cha ukuze ubuke
Kwamathanga obukhulu. Umzimba for emathangeni ekhaya